Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247996 times)
« Reply #590 on: September 19, 2011, 04:06:51 PM »
" ကင် မ ရွန်း နိုင် ငံ "
ကင်မရွန်းနိုင်ငံ ဘယ်မှာလဲ ဆိုတာ မသိသဖြင့် ကိုချူချာ ၏ သားသည် ပထ၀ီဘာသာရပ်တွင်
ဂရိတ်တူးပဲ ရသည် ။ အဖေက သားကို နှစ်သိမ့်သည် ။
" စိတ်မပူစမ်းပါနဲ့ .. ငါ့ကုမ္ပဏီကို ပစ္စည်းသွင်းနေတဲ့ ငနဲက ကင်မရွန်းကကွ..။ မနက်ဖန်ကျ
သူ့ ကို မေးပြီး မင်းကို ပြောပြမယ်..ဟုတ်ပီလား.. "
နောက်တစ်နေ့အိမ်ကို ပြန်ရောက်လာသောအခါ ကိုချူချက သားကို ပြောသည် ။
" ဒီနေ့ကင်မရွန်းကောင် ပေါ်မလာဘူး... ။ မြေပုံ ယူခဲ့..။ မင်းနဲ့ ငါ အတူ ရှာကြတာပေါ့ "
မြေပုံချပြီး သားအဖ နှစ်ယောက် ကင်မရွန်းကို ရှာကြသည် ။ အချိန်အတော် ကြာသွားသည် ။
မတွေ့ ချေ..။ အဖေဖြစ်သူ သည်းသည်းမဲမဲ ဆက်ရှာသည် ။ သား ဖြစ်သူ သတိထားမိလာသည် ။
မြေပုံထဲက မော်စကိုမြို့ နှင့် မနီးမဝေး ဆင်ခြေဖုံးမြို့ များကို အဖေ ချူချာ မှန်ဘီလူးဖြင့် တစ်ခုချင်း
အာရုံစိုက်ကြည့်နေခြင်း ဖြစ်သည် ။ သားက မေးသည် ။
" အဖေ... ကင်မရွန်းကို ရှာနေတာ ဟုတ်ပါတယ်နော်.. "
" အေးလကွာ... ကင်မရွန်းဆိုတာ ဒီအနီးအနားမှာပဲ ရှိရမယ်လို့ငါထင်တယ်.. ဒီငနဲ ငါတို့ ဆီ
လာနေတာ မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးပြီး လာတာကွ.. "
« Reply #591 on: September 19, 2011, 04:26:16 PM »
" ရှိ တာ ပဲ တောင်း တယ် "
မိန်းမက ယောင်္ကျားဖြစ်သူကို ပြောသည် ။
" ယောင်္ကျားရေ...ကျမ ပိုက်ဆံ လိုနေပြန်ပြီရှင့်.. "
" ဘာပြောတယ်.... နောက်ထပ် လိုပြန်ပြီလား.. "
" ဟုတ်တယ်.. ကျမမှာ မကျန်တော့သလောက်ပဲ "
" ငါ့အမြင်တော့ မင်းဟာ ပိုက်ဆံထက် အသိဉာဏ် ပိုပြီး လိုနေတယ်ကွ "
" အို..ရှင်ကလဲ... ရှင့်မှာ မရှိတာ ကျမ တောင်းတာမှ မဟုတ်ပဲ "
« Reply #592 on: September 20, 2011, 01:49:44 PM »
" လည် ချောင်း မ စား ဘူး "
မွေးထားသည့် ကြက်တွေ တစ်ပတ် တစ်ကောင် အခိုးခံနေရ၍ ဦးဆာမိ စိတ်တိုနေသည် ။ ဒေါသထွက်ထွက်နှင့် အိမ်ရှေ့ 
ခါးထောက်ရပ်ပြီး တစ်ရွာလုံး ကြားအောင် အော်ပြောသည် ။
" ဟရေး.. နာ့ ကြက်တွေ ခိုးစားတယ်နော်..... စား..၊ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး.. အသည်းစားတယ်နော်......စား
ရင်အုပ် စားတယ်နော်...စား ၊ ပေါင် စားတယ်နော်.. စား.. ၊ အေး.. လည်ချောင်း စားတယ်နော်
နာ့ -ီး စားသလိုပဲ "
နောက်တစ်နေ့မနက် ခြံထဲမှ ကြက်တစ်ကောင် အခိုးခံရပြီး လည်ပင်းနှင့်ခေါင်းလေးမှာ ခြံဝတွင် တွဲလောင်းတွဲလောင်းနှင့်
တွေ့ ရလေသည် ။
« Reply #593 on: September 21, 2011, 12:31:18 PM »
" အ ကောင်း မြင် သ မား "
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် နှစ်အတန်ကြာ ကွဲကွာနေရာမှ ပြန်တွေ့ ကြသည် ။ တစ်ယောက်က
" မင်းရဲ့ကျန်းမာရေး ကောင်းရဲ့မဟုတ်လား "
" သိပ်ပြီး အကောင်းကြီး မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ အိပ်ရာထဲတော့ လဲမနေဘူး..ဒါနဲ့မင်းနဲ့ ငါ
နောက်ဆုံးတွေ့ ပြီးတဲ့နောက် မကြာဘူး.. ငါ မိန်းမ ယူလိုက်တယ်ကွ... "
" ဟုတ်လား...ကောင်းတာပေါ့ "
" ကောင်းတယ်လို့မပြောနိုင်ပါဘူးကွာ.... မိန်းမက ငါ့အပေါ် အမြဲတမ်း အနိုင်ယူချင်တယ်..
စိတ်ထားလဲ မကောင်းဘူး.. "
" ဟာ...အဲ့ဒါ ဆိုးတာပေါ့ "
" ဆိုးလှတယ်လို့ လဲ ပြောလို့ မရဘူးကွ.. ၊ ငါနဲ့ ယူတော့ သူ့ မိဘတွေက ရူဘယ် နှစ်သောင်း
လက်ဖွဲ့ လိုက်တယ်. "
" ဟာ... အဲ့ဒါ ကောင်းတာပေါ့.. "
" မင်း ထင်သလောက် မကောင်းပါဘူး.. အဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ငါ သိုးတွေ ၀ယ်လိုက်တာ မကြာပါဘူး
ရောဂါဖြစ်ပြီး အကုန်သေကုန်ကြတယ် "
" ဆိုးတယ်လို့ လဲ ပြောလို့မရဘူး... သားရေတွေ ခွာပြီး ရောင်းစားလိုက်တာ အရင်း မကဘူး
အမြတ်တောင် ရလိုက်သေးတယ်... "
" အဲ့ဒီတော့ မင်း ဘာမှ မဆုံးရှုံးဘူးပေါ့. "
" ဆုံးရှုံးပါသော်ကော... ငါ့အိမ် မီးလောင်တော့ အဲ့ဒီ ပိုက်ဆံတွေ အကုန် မီးထဲ ပါသွားတယ်. "
" အဖြစ်ဆိုးလှချည်လား သူငယ်ချင်းရယ်.. "
" ဒီလို ဖြစ်တာပဲ ခပ်ကောင်းကောင်း... အိမ်နဲ့ အတူ မိန်းမပါ မီးထဲ ပါသွားတယ်ကွ.. "
« Reply #594 on: September 21, 2011, 12:58:58 PM »
" လျှို့ဝှက် ချက် "
ဆိုဗီယက် စုပေါင်းလယ်ယာတစ်ခုသို့လူငယ်တစ်ယောက် ရောက်လာပြီး မိမိသည် တိရစ္ဆာန်တွေ
ပြောသောစကားကို နားလည်ကြောင်း မိမိအား သင့်တော်မည့် အလုပ်နေရာ တစ်ခုခုတွင် ခန့် ထားပေးစေ
လိုကြောင်း စုပေါင်းလယ်ယာဥက္ကဌ ကို ပြောသည် ။
" တိရစ္ဆာန်တွေ ပြောတဲ့စကားကို နားလည်တယ် ဟုတ်လား... မောင်ရင်ပြောတာ မှန်မမှန် စမ်းကြည့်
ရတာပ.... ကိုင်း... တို့ မှာရှိတဲ့ မွေးမြူရေးခြံတွေဘက် သွားကြရအောင် "
ပထမဦးဆုံး နို့ စားနွားမတွေ ထားသောခြံသို့ရောက်လာကြသည် ။ နွားမတစ်ကောင်က " မူ..မူ မူ "
ဟု အော်သည် ။ လူငယ်က ဘာသာပြန်သည် ။
" မနေ့ က ကျမဆီက နွားနို့ဆယ်ပုလင်း ညှစ်ယူသွားပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ၈ ပုလင်းပဲ အပ်ပါတယ်တဲ့ "
နို့ ညှစ်သမကို ဥက္ကဌ ခေါ်စစ်သည် ။ နို့ ညှစ်သမ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနှင့် ၀န်ခံသည် ။
" ဟုတ်ပါတယ်... အိမ်က ကလေးတွေနဲ့လူမမာ အမေအိုကြီးကို တိုက်ဖို့ နှစ်ပုလင်း ယူမိပါတယ်.. "
ဥက္ကဌကြီး လူငယ်ကို အထင်ကြီးသွားသည် ။
" မောင်ရင် တယ်ဟုတ်ပါလား.. လာ... နောက်ခြံတစ်ခုဆီ သွားကြရအောင် "
ဒီတစ်ခါ ၀က်ခြံဆီ သွားကြသည် ။ ခြံထဲဝင်သည်နှင့် ၀က်မတစ်ကောင်က " ခရူး.. ခရူး.. ခရူး. " ဟု
အော်သည် ။ လူငယ် ဘာသာပြန်သည် ။
" ကျမ တစ်နေ့ က ၀က်သားလေး ၁၁ ကောင်တိတိ မွေးတယ်..။ အခု ၆ ကောင်ပဲ ရှိတယ်..။ ၅ ကောင်ကို
ရောင်းစားလိုက်ကြတယ် တဲ့ "
၀က်ခြံတာဝန်ခံ အမျိုးသမီးကို ဥက္ကဌကြီး ခေါ်စစ်သည် ။ ရှက်လွန်းသဖြင့် မျက်နှာကို အောက်ချပြီး အမျိုးသမီး
" ဟုတ်ပါတယ်.. အိမ်ပြင်ဖို့ငွေနည်းနည်း လိုနေတာနဲ့လုပ်မိပါတယ်.. ပေးတဲ့ အပြစ်ကို ကျမ ခံပါ့မယ် "
ဥက္ကဌကြီး လူငယ်ကို တစ်အား သဘောကျသွားသည် ။
" ကြိုက်သွားပြီ..မောင်ရင့်ကို အလုပ်ခန့် လိုက်ပြီ.. အဲ့ဒီ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ကိုယ့်အိမ်သွားပြီး ပွဲလေးတစ်ပွဲ ကျင်းပ
လိုက်ကြရအောင်.. ကိုယ့်မိန်းမ နယ်သွားနေတာနဲ့အတော်ပဲ "
ဥက္ကဌကြီးအိမ်သို့အသွားတွင် ဆိတ်တွေ မွေးထားသည့် ခြံကို ဖြတ်သွားရသည် ။ ဆိတ်မတစ်ကောင်က " ပဲ..အဲအဲ
ပဲ..အဲအဲ " ဟု အော်သည် ။ လူငယ် ဘာသာမပြန်ခင် ဥက္ကဌကြီး ကမန်းကတန်း ပြောသည် ။
" ဆိတ်မ ပြောတာကို နားထောင်မနေနဲ့.. တစ်ခါတည်း ဖြစ်ဖူးတာပါ.. ၊ ဒါကလည်း ငါ လူမှန်းသူမှန်မသိ မူးတုန်းကပါ "
« Reply #595 on: September 21, 2011, 01:30:13 PM »
" ကြေ ကွဲ စ ရာ ဖြစ် ရပ် "
ဂျော့ဘုရှ် သမ္မတ ဘ၀တုန်းက ဖြစ်သည် ။ တစ်နေ့အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုသို့ ရောက်လာပြီး
စတုတ္ထတန်း စာသင်ခန်းသို့ဝင်ကြည့်သည် ။ ဆက်စပ်မှုရှိသော ဥပမာဖြင့် စကားလုံတို့ ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို
ဖော်ထုတ်ပုံ အကြောင်း ပို့ ချနေသည်နှင့် ကြုံသည် ။
ဆရာမက ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ် ( tragedy ) ဆိုသော စကားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ စာသင်သားတို့ နှင့်
ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု လုပ်ရန် သမ္မတကြီးကို အကြံပြုသည် ။ သို့ နှင့် ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ် ကို ဥပမာပေး၍ အ
ဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ပြရန် သမ္မတကြီးက ကလေးတွေကို ပြောသည် ။ ချာတိတ်တစ်ယောက် ထပြောသည် ။
" ကျနော့် အိမ်နီးချင်းသူငယ်ချင်း အိမ်ရှေ့ထွက်ကစားတာ ကားတိုက်လို့ သေသွားရင် အဲ့ဒါ
ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်.. "
" ဒါက မတော်တဆဖြစ်မှု ( accident ) နဲ့ပိုနီးစပ်မယ် ထင်တယ်.. ကိုင်း နောက်ဥပမာလေး
တွေ ပေးကြပါဦး "
ကောင်မလေး တစ်ယောက် ထပြောသည် ။
" ကလေး ၅၀ တင်သွားတဲ့ ဘတ်စ်ကားကြီး ချောက်ထဲ ထိုးကျသွားလို့ခရီးသည် အားလုံး သေ
သွားကြရင် ကြေကွဲစရာအဖြစ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်.. "
" ဒါလဲ သိပ်မမှန်သေးဘူး.. ဒီလိုဖြစ်ရင် ကြီးမားတဲံ့ဆုံးရှုံးမှု ( great loss ) လို့ပြောကြပါတယ် "
ကျောင်းသားများ အပြန်အလှန် ဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်အရ အမေရိကားကို ရောက်နေသည့် ပီတာလေး
" အကြမ်းဖက်သမားတွေ ပစ်လိုက်တဲ့ ဒုံးကျည်ထိပြီး အမေရိကန် သမ္မတ ဘုရ်ှကို တင်ဆောင်လာတဲ့
လေယာဉ် အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ပျက်ကျသွားတယ်ဆိုရင် ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ်ပါ.. "
" မှန်လိုက်လေ....မင်း အင်မတန်တော်တယ်... ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်လို့( tragedy ) ပြောနိုင်သလဲ "
" မတော်တဆလည်း မဟုတ် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုလည်း မဟုတ်လို့ ပါ "
« Reply #596 on: September 21, 2011, 01:48:22 PM »
" ရှေ့နေ "
တရားရုံူးတွင် ဖြစ်သည် ။ ကားတိုက်ခံရသူ အသက်မရှိတော့ကြောင်း အတည်ပြုပေးရသည့်
ဆရာဝန်ကို ရှေ့ နေက မေးသည် ။
" ဒေါက်တာ့အခန်းထဲ ကားတိုက်ခံရတဲ့သူကို ယူလာတော့ သူ အသက်ရှင်နေသေးလား "
" သူ အသက် မရှိတော့ပါဘူး "
" ဘယ်လိုလုပ် ပြောနိုင်တာလဲ.. သူ့ ရဲ့ သွေးခုန်နှုန်းကို တိုင်းကြည့်တာလား. ဒါမှမဟုတ် သူ့ ရဲ့ 
အသက်ရှူသံကို နားထောင်ကြည့်တာလား. "
" အဲ့ဒီလို စမ်းသပ်ဖို့မလိုခဲ့ပါဘူး.. "
" အဲ့ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သူသေပြီ လို့ဒေါက်တာ ဆုံးဖြတ်နိုင်လဲဗျ..ဟင် "
" ယူလာကတည်းက ခေါင်းတစ်ခြား ကိုယ်တစ်ခြား ဖြစ်နေလို့ ပါ "
" ဒါပေမဲ့ ခေါင်းမရှိလည်း သူ အသက်ရှင်နိုင်သေးတယ် မဟုတ်လားဗျ.. "
" ရှင်ရုံတင် မကဘူး.. ရှေ့ နေလည်း လုပ်စားနိုင်ပါသေးတယ်.. "
« Reply #597 on: September 22, 2011, 12:27:20 PM »
" အာ ပတ် ဖြေ ခြင်း အ ကျိုး "
အိမ်ထောင်သည် ဖြစ်ပါလျှက် အာဘရမ် အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ပြစ်မှားမိသည် ။ မိမိ၏ အပြစ်ကို
၀န်ခံပြီး အာပတ်ဖြေရန် အာဘရမ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့ရောက်လာသည် ။ ၄င်းကို ရာဘိုင် က လက်ခံ
နားထောင်ပြီး မေးသည် ။
" ဘယ်သူနဲ့ပြစ်မှားမိသလဲ "
" ပြောလို့ မဖြစ်ဘူး ရာဘိုင် "
" မပြောချင်နေလေ.... ဒါပေမဲ့ ငါ ခန့် မှန်းလို့ ရတယ်... တစ်လမ်းကျော်က ပေါင်မုန့် ဆိုင်ရှင် ရှီမန်
ရဲ့မိန်းမ မဟုတ်လား...။ ဒီမိန်းမက တစ်စိမ်းယောင်္ကျားတွေနဲ့လုံးလားထွေးလား နေတတ်တယ်.. "
" မဟုတ်ပါဘူး ရာဘိုင် "
" အဲ့ဒါဆို ငါသိပြီ...။ ကွက်သစ်လမ်းက အပ်ချုပ်သမား ကက်စ် ရဲ့သမီးနဲ့ဖြစ်တာ မဟုတ်လား..
ဒီကောင်မလေးက ပျံတံတံ နန့် တံ့တံ့ ရယ်... "
" မဟုတ်ပါဘူး "
" မဟုတ်ဘူး .ဟုတ်လား ..။ ကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ ရာဘင်နိုဗစ်ခ်ျ ရဲ့ တူမ...ဟို..ရည်းစားများတဲ့
ကောင်မလေးနဲ့ဖြစ်တာပေါ့.. ဟုတ်လား.. "
" မဟုတ်ပါဘူး.. "
သူ ပြောတာ တစ်ယောက်မှ မဟုတ်သဖြင့် ရာဘိုင် စိတ်တိုသွားလေသည် ။
" ဟေ့.. မင်းလို အယုတ္တမာကောင်ကို ငါ အာပတ်ဖြေမပေးနိုင်ဘူး...သွားတော့ "
အာဘရမ် ဘုရားကျောင်းမှ ပြုံးပြီးထွက်လာသည် ။ အပြင်တွင် စောင့်နေသော မိတ်ဆွေများ ၀ိုင်းမေး
" ဟေ့..ဘယ်လိုလဲ...အာပတ်ဖြေပေးလိုက်သလား "
" ဟင့်အင်း "
" အဲ့ဒါဆို ဘာဖြစ်လို့ပြုံးနေရတာလဲကွ. "
" လိပ်စာ အသစ်တွေ ရလာလို့"
« Reply #598 on: September 22, 2011, 01:04:10 PM »
" သြော် မိန်း မ "
ဥရောပနိုင်ငံကြီးတစ်ခုတွင် ထူးခြားသည့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို သိပ်မကြာသေးခင်က ဖွင့်လှစ်လိုက်သည် ။
အမျိုးသမီးတွေ အတွက် သီးသန့် ဆိုင်ဖြစ်သည် ။ အမျိုးသမီး အ၀တ်အစား ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းနှင့် အခြား
အမျိုးသမီးအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် မဟုတ်..။
ဘ၀ ကြင်ဖော် ရှာသူများအတွက် အထူးဆိုင် ဖြစ်သည် ။ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ယောင်္ကျားကို ရွေးပြီး
၀ယ်ယူနိုင်သော ဆိုင်ဖြစ်သည် ။ ဆိုင်၏ ၀င်ပေါက်တွင် အောက်ပါကြော်ငြာစာတမ်းကို ချိတ်ထားသည် ။
၁။ ဆိုင်ကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်းသာ လာရမည် ။
၂။ ဆိုင်တွင် အထပ်ခြောက်ထပ် ရှိသည် ။ တစ်ထပ်မြင့်လေလေ ယောင်္ကျား၏ အရည်အချင်း
များလေလေ ဖြစ်သည် ။
၃။ ကြိုက်ရာအထပ်တွင် မိမိနှစ်သက်သည့် ယောင်္ကျားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်သည် ။ သို့ မဟုတ်
နောက် တစ်ထပ်သို့ဆက်တက်နိုင်သည် ။
၄။ အောက်ထပ်သို့ပြန်ဆင်းပြီး မ၀ယ်ရ ။
စိတ်ကြိုက်တွေ့ မည့် ယောင်္ကျား ရှိလိုရှိငြား ယင်းဆိုင်သို့သွားကြည့်ရန် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဆုံးဖြတ်လိုက်
သည် ။ ပထမ ၀င်ပေါက်တွင် " အလုပ်အကိုင်ရှိသော ယောင်္ကျား " ဟူသော စာတမ်းကို ချိတ်ထားသည် ။
အမျိုးသမီး မစဉ်းစားပဲ နောက်တစ်ထပ်ကို တက်သည် ။ ဤ အထပ်တွင် " အလုပ်အကိုင်ရှိပြီး ကလေးချစ်တတ်
သည့် ယောင်္ကျား " စာတတမ်းကို ချိတ်ထားသည် ။ ဤအထပ်ကိုလည်း ၀င်မကြည့် ။ တတိယထပ်ကို ခပ်သွက်
သွက် ဆက်တက်သည် ။ " အလုပ်အကိုင်ရှိ ။ ကလေးချစ်တတ်ပြီး ရုပ်ချောသော ယောင်္ကျား " စာတမ်းချိတ်
" တယ်ဟုတ်ပါလား " ဟု အမျိုးသမီး စိတ်ထဲက ပြောသည် ။ သို့ သော်လည်း နောက်အထပ်မှာ သည့်
ထက်ကောင်းတဲ့ ယောင်္ကျားကို တွေ့ နိုင်သည် ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ပဉ္စမထပ်ကို တက်ပြန်သည် ။ အ၀င်ဝ
တွင် " အလုပ်အကိုင်ရှိ ၊ ကလေးချစ်တတ် ၊ ရုပ်ချော ၊ အိမ်မှုကိစ္စ ကူလုပ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်တတ်သောယောင်္ကျား "
ဟု ရေးထားသည် ။ ဒီလိုအရည်အချင်းမျိုးရှိသော ယောင်္ကျားကို ရထားလျှင် တစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာတော့မည်
ဟု အမျိုးသမီး တွေးသည် ။ ထို့ ကြောင့် ဒီအထပ်မှာပဲ မိမိလိုချင်သည့် ယောင်္ကျားကို ရွေးတော့မည်ဟု အမျိုးသမီး
သို့ သော် နောက်ဆုံးအထပ်မှာ ဒီ့ထက်သာသည့် ယောင်္ကျား ရှိနေလျှင် ဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲ ဟု သူ့ ကိုယ်သူ ပြန်
မေးသည် ။ သို့ နှင့် စောစောက ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချက်ချင်းပြန်ပြင်ပြီး ခြောက်ထပ်ကို ရင်တထိတ်ထိတ်နှင့် တက်သည် ။
သူမ ခြောက်ထပ်ရောက်သည်နှင့် ၀င်ပေါက်ရှေ့ တွင် ထောင်ထားသော ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တွင် အောက်ပါစာသား
" ခင်ဗျားဟာ ဒီအထပ်ကို တက်လာတဲ့၃၁၄၅၆၀၁၂ ယောက်မြောက် အမျိုးသမီး ဖြစ်ပါတယ်. ။ ဒီအထပ်မှာ
ယောင်္ကျား မရှိပါဘူး..။ မိန်းမတွေ ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သူ မရှိဘူးဆိုတာကို သက်သေထူ
ပြဖို့ အတွက် ဒီဆိုင်ကို ဖွင့်ထားတာပါ..။ ကျနော်တို့ ဆိုင်ကို လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ "
« Reply #599 on: September 22, 2011, 01:24:01 PM »
" ပျောက် ရင် ပြီး ရော ပေါ့ "
အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် ဆရာဝန်နှင့်ပြရန် ဆေးရုံ ပြင်ပလူနာဌာနသို့ရောက်လာသည် ။ မိမိ အလှည့်သို့ 
ရောက်သည်နှင့် ဆရာဝန်အခန်းထဲ ၀င်သည် ။ လူငယ်ဆရာဝန် ဖြစ်သည်ကို တွေ့ ရသည် ။ ဆေးတက္ကသိုလ်မှ
ပူပူနွေးနွေး ဘွဲ့ ရသူဟု ထင်ရသည် ။
ဆယ်မိနစ်လောက်ပဲ ကြာမည် ။ အဒေါ်ကြီး ပါးစပ်က အကျယ်ကြီးအော်ပြီး အခန်းထဲမှ ကြောက်လန့် တကြား
ပြေးထွက်လာသည် ။ " မဖြစ်နိုင်ဘူး....မဖြစ်နိုင်ဘူး..ဘုရား..ဘုရား .. " ဟု ရေရွတ်ကာ ဆေးရုံ ကော်ရစ်ဒါ
အတိုင်းပြေးသည် ။ တစ်ဖက်မှ လျှောက်လာသော ဆရာဝန်ကြီးက သူမကို တားလိုက်ပြီး မေးသည် ။ မိန်းမကြီး
က ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို ပြောပြသည် ။
အလွန်ဒေါသ ထွက်နေသော အမူအရာဖြင့် လူငယ်ဆရာဝန်၏ အခန်းထဲ ၄င်းဝင်သည် ။ ထို့ နောက် မာကြော
သော လေသံဖြင့် လူငယ်ဆရာဝန်ကို ပြောသည် ။
" ဟေ့ မောင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ...၊ စောစောက အဒေါ်ကြီးဟာ အသက် ၅၇ နှစ်ရှီပြီ..။ သူ့ ဆီမှာ
အရွယ်ရောက်ပြီး သမီး ရှိတယ်..။ မကြာခင် အဘွား ဖြစ်တော့မယ့် အဒေါ်ကြီး ။ အဲ့ဒီ့မိန်းမကြီးကို ဒေါ်ဒေါ့်
မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ လို့မင်းမို့ပြောထွက်တယ် ...အံ့ရော....."
လူငယ်ဆရာဝန် တစ်ခုခုကို ရေးနေရာမှ ခေါင်းမော့ပြီး ဆရာဝန်ကြီးကို အေးအေးလေး ပြန်ပြောသည် ။
" ဒါပေမဲ့ သူ ကြို့ ထိုးတာ ပျောက်သွားတယ် မဟုတ်လား.. "